Cumar Al-Bashiir oo maxkamad la soo taagay – Radio Damal
Cumar Al-Bashiir oo maxkamad la soo taagay
Cumar Al-bashiir oo gadhwadeen ka ahaa xukun kamida kuwa ugu arxanka daran Afrika ayaa immika lala xisaabtamayaa waxaa hore loogu xukumay laba sano oo xadhiga iyadoo lagu helay musuqmaasuq.
Kiiskan waxaa xudun u ahaa 25 milyan oo dollar oo laga helay gurigiisa muddo yar ka dib markii xilka laga qaaday, horraantii sannadkan.
Cumar xasan Al-Bashiir wuxuu sheegay in lacagta ay tahay hadiyad uu ka helay boqortooyada Sacuudiga, gaar ahaan dhaxal-sugaha, Amiir Maxamed Bin Salmaan.
“Maxkamadda waxay dembi ku heshay Cumar Xasan Axmed Al-Bashiir,” ayuu yiri garsooraha go’aanka gaaray Al-Sadiq Cabdiraxmaan oo inta ku daray: “Maxkamadda waxay go’aansatay in ay u dirto xarun bulsho oo loogu talagalay daryeelka iyo dhaqancelinta oo laba sano lagu hayn doono.
Dhankakale Waxaa immika loo haystaa inuu abaabulay inqilaabkii xukunka uu ku maroorsaday 1989 isagoo inqilaabay Dawladii la doortay iyo Raiisal wasarahii
Moaz Hadra waa mid kamida garyaqaanada dacwada ku oogaya
Waxa u sheegay inay cashar u noqon doonto qof kasta oo isku daya inuu burburiyo hay’adaha distooriga ah ee dalka.Lakiin kuwa difaacaya ayaa sheegay in maxkamadani la siyasadeeyey
Dawlad isku dhafa oo milatari iyo rayid ah ayaa cadaadis la kulmaysa Si ay doorashooyin u qabato 2022 oo dalka rayid gacanta loo galiyo
Madaxweynihii hore ee Sudan, wuxuu xilka ku qabsaday afgembi dhacay sannadkii 1989-kii, waxaana xilka laga tuuray bishii April ee sannadka, 2019, ka dib dibadbaxyo dhowr bilood ka socday dalkaas.
waxa doondoonaysay Maxkamadda Caalamiga ah ee dambiyada taas oo la xiriirta gaboodfallo loo gaystay dad badan oo 2003 ilaa 2008 ka dhacay gobolka Daarfuur.
Waxyar uun kaddib markii xilka laga qaaday Abriishii sanadkii hore, Bashiir ayaa la xiray waxaana la geeyay xabsiga Kober ee la adeegsan jiray waagii gumeystaha uu dalkaas maamulayay, halkaas oo uu laf ahaantiisa uu muddo sanado ah ku hayay boqollaal xildhibaan, midowga shaqaalaha, weriyayaal iyo xubno mucaarad ah.
Hasayeeshee in Bashiir la gayn doono maxkamadda The Hague, ama in maxkamadayntiisa oo ay ku lug leedahay ICC ka dhici doonto Suudaan ayaanan weli kala cadayn.
Janaraal Cabdulfataax al-Burhan, madaxa golaha ku meelgaarka ah ee dalkaas maamula, kaas oo haatan ku fadhiya booska madaxweynaha, ayaa waxa uu hay’adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch u sheegay in “aanay jirin cid sharciga ka sarreysa”.
“Dadka cadaaladda ayaa la marsiin doonaa, ha ahaato gudaha ama dibadda Suudaan, iyadoo gacan aynu ka helayno ICC,” ayaa laga soo xigtay inuu yiri. “Si buuxdo ayaan ula shaqeyn doonnaa ICC da.”
Sidoo kale waxay tahay in wax badan laga qabto dhinaca ICC da.